Doorashada oo ay hal sanno ka dhiman tahay iyo xaalada siyaasada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doorashada oo ay hal sanno ka dhiman tahay iyo xaalada siyaasada
La daabacay onsdag 18 september 2013 kl 12.54
Sabtida soo socota mudo hal sanno ah ayaa naga xigta doorshada soo socota ee dalkan Iswiidhen sannadka 2014. Dhanka siyaasada xilligan waxuu u egyahey xilligii dhigiisa ahaa ee doorashadii la soo dhaafey, xilligaas oo xisbiyada garabka guudka iyo caagarka ay aad ugu horeeyeen xaga taageerada codbixiyaasha balse xisbiyada xukun waddaga ah ee Alliasen ayaa ka soo kabtey hoos u dhacooda taas oo keentay in doorashada ku guuleystan. Laakiin hoos u dhaca maanta heysta Alliansen uu ka dhib badanyahay kii heystey xilligan oo kale dooorshadii hore, hadana wey dhaci kartaa in ay mar labaad ka soo kabtaan, sida ay aaminsan tahay Jenny Madestam oo ku xeel dheer culumta siyaasada.
- Hal sanno siyaasada Iswiidhen waa waaqti dheer. Maanta codbixiyaasha waxey sida ay u codeynayaan gaaraan xilliga ay doorashada soo dhawaato. Marka ma qabo in sida hada afkaar uruurinta muujineyso laga dhigto natiijada doorashada. Balse waxyaabo badan ayaa dhaci kara sida aan ka baraney doorashadii hore xilligaas oo ay xaalada u dhigantay sida ay hada tahay.
Marka ay soo dhawaatey doorashadii 2010 xisbiga garabka rödgrön ayaa dhanka tirkoobyada taageerda aad ugu horeeyey xisbiyada Alliansen. Laakiin dhowr bilood ka bacdii waxaa isbedeley taageerada. Xisbiyada hantigoosadka ah ee Alliansen ayaa ku guuleystey in ay talada sii hayaan. Maanta dhanka taageerada labada garab waxaa u dhaxeeya farqi u dhigma boqolkii 10 oo ay rödgrön ku horeeyaan. Balse codbixiyaasha ayaa weli ah kuwo hadba doc u janjeersama. Waxaana dhaci karta in xaalad cusub oo is-bedel afkaareed abuurta imaato. Laakiin hada waxaa jira dhowre wax oo ku adkeynaya xisbiyada hantigoosadka ah ee Alliasen in ay ka soo kabtaan hoos u dhaca taagero ee maanta heysa marka doorashada .
Arintan ugu wey ayaa ah in ay xukumada Alliasen ay labo goor oo isku xigta ku guuleysatey dooroshada, arintas oo aan u hiilineyn xisbiyada talada hada haye sida ay aaminsan Toivo Sjörén oo madax ka ah rugta afkaar uruurinta TNS Sifo.
- xukumad kasta markasta waa ku dhib in ay ku guuleysato doorashada ku xigta, marka sadexaadna waa ka sii adagtahay. Basle ma ahan wax suurtogal aheyn waayo horey wey u dhacdey. Xukumadii Göran Persson sadex goor oo isku xigta ayey doorashada ku guuleysatey, waxaa jira tusaaleyaal lamid ah Yurubta kale. Laakiin ma ahan wax badanaa dhaca. Marka wey iska cadahey in ay ka sii adkaaneyso hadba waqtiga dheer ee ad talada heysid, waayu codbixiyaasha dalabkooda waa uu sii bataa sidii hore, ayey tiri.
Sida wargeyska Dagens Nyheters horey u ogaadey ma jirto hogaamiyo siyaasi oo sadex goor oo isku xigta doorasho ku raayey Yurub tobankii sanno ee ugu danbeeyey.
Arinta dhankeeda welwelka leh ee xukumada hada talada heysa u taala ayaa ah in kalsoonida codbixiyaasha qaybo kamid arimaha siyaasada ay xukumada dhumisey, tusaale arimaha iskuulka oo horey u ahaa arimo looga danbeeyo xisbiga Folkpartiet ayaa hada noqdey mid xisbiga Socialdemokratiga kalsooni badan loogu qabo. Xataa sidoo kale arimaha suuqa shaqada ayaa ah kuwo kalsoonida shacabka ay u janjeerto garabka xisbiyada mocaaradka ee gaduudka iyo cagaarka, sidas laga xigtey rugta afaar aruurinta Sifo.
Balse marka laga hadlayo su'aalaha la xiriira dhaqaalaha weli waxaa kalsoonida dadka heysta xisbiyada alliansen, laakiin xataa tirokooyada kalsoonida dhaqaalaha ayaa hoos u sii dhacaya . Taas oo keeni karta in ay ku adkaato ka soo kabashada hoos u dhaca heysta alliansen sida ay qabto Toivo Sjören.
- Su'aalaha qaar way dhumiyen halka kuwa weli ku adagyahiin aysan sidaas uga adkeyn xisbiyada rödgrön. Dalcada markaan hortaala dowladda waa dalcad weyn tii doorashadii hore ayey tiri Toivo Sjören.
Balse afartii sanno waxyaabo badan ayaa isbadeley. 2009 xisbiga soogalooti diidka ah Sverigedemokratiga ayaan ku jirin barlamaanka balse hada ku jira raadinayana saameyn intaas ka balaaran. Halkee doorashadii hore jirtey labo garab oo iska soo horjeeda oo kalo ahaa alliansen iyo rödgrön. Halka hada hogaamiyaha Sociademokratiga mar kasta ku celceliyo in uu rabo in uu burburiyo siyaada ku dhisan garabeysiga si ay u suurtogal noqoto soo dhisid xukumad garabeysi ka baxsan marka doorashada soo socota dhamaato. Laakiin garabka alliansen ayaa ah kuwo weli isheysta oo is ogal inkastoo xisbiga Centerparriet och Kristdemokratiga tirokoobyo la sameyey muujinayaan in ay dhici karto in ay ka hoos maraan xariijinta afarta procenti ee lagu soo galo barlamanka Iswiidhen taas oo qasab ka dhigi karta in isheysga xisbiyadan alliansen dildilaaco. Waayo xisbiyada yaryarka ah waxey u baahanyahiin in ay ismuujiyaan si ay u sii noolaadaan.
Waxaase taa kuu sii raacda doorashada EU oo dhaci doonta 25 maj sannadka danbe, afar bilood ka hor doorashada barlamaanka Iswiidhen.
Hadaba maxey noqon kartaa waxa go'aamin doona natiijada doorashada soo socota
Toivo Sjören oo ka tirsan Sifo waxuu qabaa in arimaha asbuucyada ugu danbeeya laga hadalayo iyo sida agendayaasha u egayahiin in ay go'aamin doonto. Jenny Madestam ku xeel-dheere culumta siyaasada ayada waxey farta ku fiiqeysaa arimo kale.
- Arinta Moderaterka sameeyey 2006 kuna celiyeen 2010 waxey aheyd in ay hayeen sheekooyin ku sabsan Iswiidhen oo ay kamid ahaayeen sida loo jabin lahaa banaan ka ahaansha bulsahda, in shaqado tahay wax lagu faa'idayo, sheekooyinkasna waxaa ka dhashey dib u habeyn caqli ku dhisan sida canshuur dhismistii shaqada iyo dhimistii lagu sameeyey nidaamka caymiska. Hada kii ku guuleysta doorashada soo socota in uu keeno sheekooyin dadka u arki karaan kuwo quseeya oo taagan, hayana dib u habeyntii wax looga qaban lahaa. Kaas ayaa dorashada ku guuleysan doona, ayey tir Jenny Madestam oo culumta siyaasada ka dhigta Stockholm University.
Warbaxintan waxaa diyaariyey Anders Ljungberg oo ka tirsan laant SR International. Warsame Elmi ayaa soo turjumey.
Dood natiijada doorashada soo socota
Doorashada Barlamaanka EU
Doorashada Degmooyinka iyo Gobalada